Maraakiib dagaal oo gaaray xeebta Garacad ee Gobolka Mudug | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Maraakiib dagaal oo gaaray xeebta Garacad ee Gobolka Mudug
Maraakiib dagaal oo gaaray xeebta Garacad ee Gobolka Mudug
April 9 (Radio Baidoa)— Wararka ka imaanaya deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in xeebta deegaankaas ay ku soo dhowaadeen maraakiib dagaal iyo diyaarado qumaatiga u kaca oo dul heehaabayay.
Maraakiibtan dagaalka ayaa la sheegay inay yihiin kuwa gaashaanbuurta NATO, kuwaasoo dhaq dhaqaaq ciidan oo amniga xeebta ku xaqiijinayaan.
Warar soo baxayay saacadihii la soo dhaafay ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay dhaq dhaqaaqyo ka wadeen degmada Xarardheere, Ceeldheer iyo deegaano ku dhow Hobyo oo ah deegaano xeebeed, waxaana deegaanadaas la soo sheegay in isgaarsiinta ka jareen.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo doonyo dheereeya watay ayaa 14-kii bishii hore ee Maarso ka soo degay xeebta Garacad, waxaana dagaalyahanadaas oo boqolaal gaarayay ay u gudbeen deegaano kale, oo ay kula dagaalameen Ciidamada Puntland.
Puntland ayaa markii dambe ka itaal roonaatay dagaalyahanadaas, kuwaasoo badankood ay gacanta ku dhigtay, waxaana kuwa la qabtay ku jiray caruur da’dooda u dhaxeysa 12-20.
Maamulka Puntland ayaa horay ugu eedeeyay ciidamada caalamiga ee la dagaalama burcad badeedka sida NATO inay ka hortagi waayeen Al-Shabaabkii doonyaha ku yimid deegaanada Puntland.